နိုးထလာသော အမျိုးသားရေး | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« သေပြီးတဲ့လူတွေကိုတောင် စော်ကားနိုင်တဲ့ အောက်တန်းစားလူမျိုးတွေရှိတဲ့ နိုင်ငံ
State sponsored Hate Speeches dehumanized the Muslims in the eyes of Myanmars »
နိုးထလာသော အမျိုးသားရေး by လင်းထက်ဆွေ
ရခိုင် ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည် တစ်လွှား မှာ မျိုးချစ်စိတ်တွေ နိုးကြားလာကြတယ်။ အချို့ က လဲ ကန်းကန်း ရိုင်းရိုင်း။ အချို့ ကလဲ ချင့်ချင့် ချိန်ချိန်။ အမျိုးသားရေးဝါဒ ရဲ့ အလံတွေ လဲ လွှင့်ထူလာကြတာ တွေ ရတယ်။ ၈၈၈၈ အုပ်စု က တောင် အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ဆို တဲ့ အကွက် ကို နင်း
လာရင်းနဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေခံ ကို တည်ဆောက်လာတာ ကို တွေ့ ရပါတယ်။ကိုလိုနီ အောက် က ရုန်းထလွတ်မြောက်လာ ရတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု တွေ ကို အမျိုး ဘာသာ သာသနာ နဲ့ အစပြု ခဲ့ လို့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ဟာ တခြား ကိုလိုနီ နိုင်ငံတွေ လို ပဲ အားကောင်းမောင်သန် ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ အတိတ်ရှိတာ တော့ မဆန်ပေဘူး။ ဖြစ်ထိုက်တယ်လို့ ပြော ရမယ်။ နယ်ချဲ့ တွေ ကို မုန်းတဲ့ စိတ် နဲ့ မြန်မာပြည် တစ်လွှား မှာ မျိုးချစ်စိတ်တွေ နိုးကြားခဲ့ ကြလို့ ပဲ။ အသက်သွေးတွေ ပေးခဲ တယ် တိုင်းပြည်ထူထောင်ခဲ့ ကြတယ်။ ဒီရှုထောင့် က ကြည့် ရင် လွတ်လပ်တဲ့ မြန်မာပြည် ဟာ အမျိုးသားရေးဝါဒ က မွေးဖွားပေးခဲ့ တာ လို့ ပြော ရမလို တောင် ဖြစ်တယ်။
အခုလဲ ရခိုင် အရေး ကို အခြေတည် ပြီး အတိတ် ရဲ့ အရိပ်တွေ ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းချင်ပုံ ရပါတယ်။ နေရာတိုင်း မှာ စစ်သွေးစစ်သံ တွေ က တစ်ညံညံ ဝေ လို ပဲ။ ကိုယ်စီးမဲ့ မြင်း ကို အထီး အမ ခွဲ ခြား တတ်ကြဖို့ တော့ လို လိမ့် မယ်။
မေးခွန်း က အမျိုးသားရေးဝါဒ လို မလို မဟုတ်ဘူး။ အမျိုးသားရေးဝါဒ က နိုင်ငံ တစ်ခု ရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ် ဖြစ်လို့ ပဲ။ တစ်နည်း အား ဖြင့် နိုင်ငံတစ်ခု ရဲ့ အတ္တ နိုင်ငံတစ်ခု ရဲ့ သက္ကာယဒိဋ္ဌိ ပါပဲ။ အမျိုးသားရေးဝါဒ ကို အခြေခံ သော လစ်ဘရယ် ဒီမို ကရေစီ ကို ဖေါ်ဆောင် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာ မှာ ပြောချင်တာ က တော့ ဒီ နှစ်ခု လုံး က တန်းတူ အရေးကြီးတယ် ဆို တာ ကို သိမှတ်ထားဖို့ တော့ လို တယ်။ တစ်ခု အတွက် တစ်ခု ကို စတေး ပစ်ရမှာ မဟုတ် ပဲ ဒီ ၂ ခု (အမျိုးသားရေးဝါဒ နဲ့ ဒီမိုကရေစီ) ကို ဟန်ချက်ညီ အောင် ကျင့်သုံးကြ ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ကို ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ကြမလဲ။ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ကြမယ် ဆို ရင် တော့ အလွန် အန္တရာယ်ကြီးမားပြီး ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ လူမျိုးကြီးဝါဒ ဘာသာကြီးဝါဒ ဆီ ကို ဦးတည်သွား မှာ အသေ အချာ။ ဒီလို လှုပ်ရှားမှု တွေ ကို ဦးဆောင် သူ တွေ ဟာ အစွန်းရောက် ရက်စက် လူမဆန်တဲ့ အာဏာရှင်တွေ အဖြစ် နိဂုံးချုပ် ရတာ ချည်းပဲ ဖြစ်တယ်။ ဟစ်တလာအစ ဟူစိန်အလယ် ကဒါဖီ အဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေ ဟာ အမျိုးသားရေးဝါဒ နဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ သူတွေ ဆို တာ သတိရကြပါ။
တစ်နေ့ က သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းသေတမ်းစာ ဆို တာ ဖတ်ရတယ်။ အချုပ်ပြောရ ရင် အလွန် အန္တရာယ်ကြီးမားပြီး ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ လူမျိုးကြီးဝါဒ ဘာသာကြီးဝါဒ ကို သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ရဲ့ ပါးစပ် မှာ တပ် ပြီး ပြော ခိုင်း ထား တာ ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဆရာကြီးလို ငြိမ်းချမ်းရေး မြတ်နိုးသူ က သေခါနီး မှာ ဒါမျိုးပြောခဲ့ တယ် ဆို ရင် တောင် သူငယ်ပြန်တာ ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက် က ဒါ ကို ဖန်တီးခဲ့ တယ် ဆို လဲ အဲဒီသူ ဟာ The Enemy of the State ပါပဲ။
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ကြမယ် ဆို ရင် လူများစု ဗမာ တွေ ရဲ့ လူမျိုး ဘာသာစကား နဲ့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ကို အခြေခံ ပြီး ဖွင့် ကြမှာ လား။ ဒီလို ဆို ရင် တော့ မြန်မာပြည် ရဲ့ အနာဂတ် နေ့ ရက် တွေ က မငြိမ်းချမ်းနိုင်တော့ ပါ။ ပြည်တွင်းစစ်မီးလျှံ တွေ ဆီ ကို ပဲ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ က တွန်းပို့ လိမ့် ဦးမယ်။ မြန်မာပြည် က အခြားသော လူမျိုး အခြားသော ဘာသာစကား နဲ့ အခြားသော သာသနာတွေ လဲ အားကောင်းကောင်း တည်ရှိ နေလို့ ပါပဲ။ တူ ဖြစ်တုန်း ကိုယ် က ထု ရက် ရင် ပေ ဖြစ်တဲ့ အလှည့် ကျ လဲ ကိုယ် က ခံ ရလိမ့်မယ်။
ခါတော်မီ နိုင်ငံရေး အင်အားစု တွေ က အမျိုး ဘာသာ သာသနာ နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ကို ကိုင်စွဲ လာ ကြ ရတာ ဘာကြောင့် လဲ။ ဆောင်းပါရှင် ပြော သလို (( အမှန်တကယ်တွင်တော့ ပြည်သူလူထုကို လှုံ့ဆော် မောင်းတင်ပေးနိုင်သော စိတ်ဓါတ်မှာ ဤ အမျိုးသားရေးဝါဒသာဖြစ်၍…)) ဆိုတာကြောင့် ပညာမတတ် ဆင်းရဲတွင်းထဲ နစ်နေတဲ့ လူထုကြီး ကို စေစား ကိုင်တွယ် အသုံးချ ချင် လို့ ပါပဲ။ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ဟာ တတိယကမ္ဘာ နိုင်ငံ တွေ မှာ ဈေး ပေါပေါ နဲ့ ရ နိုင်တဲ့ လူထု စည်းရုံးရေး အိုင်ဒီယိုလိုဂျီ လက်နက် ဖြစ်နေလို့ ပါပဲ။ သွေးဆူလွယ်တဲ့ လူအုပ်နိုင်ငံရေး Mobocracy ဖက် ကို တိမ်းညွှတ်သွား နိုင်ပါတယ်။ လူတွေ ကို အလွယ်စည်းရုံး နိုင်တဲ့ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ဟာ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး တွေ အများကြီး ရှိ နေတာ သိသင့် ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု ကို အသက်ပေး ကာကွယ် သူ တွေ က ကာကွယ် ပြည်ထောင်စု ရဲ့ အကျိုးအမြတ် ကို ခူးခပ် စားသူ က ခူးခပ်စား နဲ့ င အ တွေ မို့ သာ ဒီ အမိုက်လှိုင်း ကြီးထဲ မှာ သံယောင် လိုက် ကြ ရတာလေ..။ ခုထိ သင်ခန်းစာ မရ တတ် ကြသေးဘူး လား နောင်တ မရတတ် ကြသေးဘူးလား လို့ ဧရာဝတီ နဲ့ ရိုးမ တောင်တန်းကြီးတွေ သိမ့်သိမ့်တုန်ဟီး သွားအောင် တောင် ဟစ်ကြွေး လိုက် ချင်ပါရဲ့။
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ကို ရှေ့တန်းတင်လာ ခြင်း ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား တွေ အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲစေမဲ့ သံသယ မျိုးစေ့တွေ ကို စိုက်ပျိုးပေးမဲ့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူဝါဒ ပဲ ဖြစ်တယ်။
ဒါဆိုရင် မှန်ကန်တဲ့ သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ က ဘာလဲ။
မှန်ကန်တဲ့ သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ဆိုတာ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကို အခြေမခံ ပဲ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ကို အခြေခံတဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ (တနည်း နိုင်ငံချစ် ၀ါဒ ) ပဲ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံ တစ်ခု မှာ နယ်နမိတ်အကျယ်အ၀န်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ နဲ့ နိုင်ငံသား တွေ ပါဝင် ပါတယ်။ ပထ၀ီနယ်နမိတ်အကျယ်အ၀န်း တစ်ခု အတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အောက်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ နိုင်ငံသား ဖြစ်ထိုက်တဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်း ဟာ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ မခွဲခြားပဲ မိမိ နိုင်ငံတော် ကို ချစ်တာ ကာကွယ်တာ အကျိုးဆောင်တာဟာ မှန်ကန်တဲ့ သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ပါပဲ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ကို အခြေခံတဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ ရှိမှ တကယ် ပွင့်လင်းလွတ်လပ် တဲ့ တရားမျှတမှု ဆို တာ ရှိမယ်။
တကယ် ပွင့်လင်းလွတ်လပ် တဲ့ တရားမျှတမှု ဆို တာ ရှိ မှ လဲ သံသယကင်း တဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ဖြစ်မယ်။
သံသယကင်း တဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ဖြစ်မှ လဲ တိုးတက်အောင်မြင်တဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခု ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်။
လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ အနှစ်သာရ ကလဲ မတူကွဲပြား ခြားနားမှုတွေ လွတ်လပ်စွာ အတူတည်ရှိ်နိုင်ခြင်းပဲ မဟုတ်ပါလား။
လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ အနှစ်သာရ က လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပင်ကိုယ်တန်ဖိုး နဲ့ အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေ ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပင်ကိုယ်တန်ဖိုး နဲ့ အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေ ကို ဘယ်လို စကားလုံးကြီးတွေ အတွက် မှ မစတေး သင့်ဘူး ဆို တဲ့ အမြင် ပါပဲ။
ဒါကြောင့် အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အလံ မြင့်မြင့်လွှင့်ထူပြီး အယာတိုလာ တစ်ယောက် ရဲ့ သံမဏိအကျဉ်းထောင်ထဲ မှာ နေလို ကြရင် တော့ လဲ ဒါက ဗမာ တွေ ရဲ့ ရွေးချယ်မှု လို့ ပဲ ဆို ရမယ်။ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အသာစီး ရမှု က လူတစ်ဦးချင်းစီ ရဲ့ လွတ်လပ်မှု နဲ့ တန်ဖိုးထက် အရေးကြီးတယ် ဆို ရင် လဲ ဒါက ဗမာ တွေ ရဲ့ ရွေးချယ်မှု လို့ ပဲ ဆို ရမယ်။
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အိပ်မက်ဆိုးကြီး မှ အမိပြည်ပြန်မာ အမြန်ဆုံး နိုးထလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ။
This entry was posted on August 13, 2012 at 1:54 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “နိုးထလာသော အမျိုးသားရေး”
ရွှေမြန်မာမီဒီယာဂရု တွင် ၁၄.၈.၂၀၁၂ နေ့ တွင် တင်ထားသော သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ပဋိပက္ခအပေါ် အမြတ်ထုတ်ရန် ကြိုးစားနေသော မူဆလင်များ ဆိုသည့် သတင်းတွင် ကွန်မန့်ပေးရန်အတွက် ကူးယူသွားပါသည်။ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
August 15, 2012 at 3:04 am | Reply